वि’चित्र संसार: ‘मलाई क्या’न्स’र भयो’ भनेर श्रीमतीलाई ढाँटेर विदेशमा ४ वर्ष देखि अर्कै महि’लासंग म’स्ती (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/वि’चित्र संसार: ‘मलाई क्या’न्स’र भयो’ भनेर श्रीमतीलाई ढाँटेर विदेशमा ४ वर्ष देखि अर्कै महि’लासंग म’स्ती (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । श्रीमान परिवार’कै खुसीका लागि भन्दै ४ वर्ष अघि वि’देश गएका थिए । उनी साउदी गएका थिए । तीन वर्ष सम्म विदेशमा हुँदा उनले श्रीमतीलाई कुनै सहयोग गरेनन् । सानो छोरा सहित श्रीमतीलाई नेपालमा छोडेर गएका गीता विकका श्रीमान छोरा छोडेर विदेश गएका थिए ।
अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका १ मा श्रीमती र छोरालाई अ’लपत्र पारेर गएका गीताका श्रीमान अहिले सम्म फर्केर आएका छैनन् । घरमा सासु ससुरावाट छुट्याएर अलग्गै राखेर उनी विदेश गएका थिए । चार वर्ष अघि विदेश गएका उनी वर्षमा एक पटक नेपाल आउँथे । तर उनी घर फर्केर आउँदा पनि कहिल्यै पैसा लिएर आउँथेनन् । म विरामी भएँ पै’सा कमाउन सकिन भन्दै श्रीमतीलाई झुटो बोल्ने गरेका थिए ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
तर उनले विदेशमै अर्को विवाह गरेका रहेछन् । पछिल्लो पटक आउँदा मैले अर्को विवाह गरेको छु । तँलाई कति पैसा चाहिन्छ ? ५० हजार दिउँ की २० लाख चाहिन्छ भने । म अब तँ संग बस्दिन अर्को विवाह गरेको छु भनेर श्रीमतीलाई अचानक भने । चार वर्ष सम्म कहिले के बिरामी भएँ भन्दै झुटो बोल्दै राखे ।
श्रीमान विरामी भए भनेर गीता निकै चि’न्तित थिइन् । तर अर्को विवाह गरेका कारण उनले पै’सा नपठाएका रहेछन् । भोली तँ प्रहरी चौकी आइज म अर्को श्रीमती लिएर आउँछु त्यहीँ छि’नो’फानो गरौंला भनेर पनि झु’क्याए । भोली पल्ट उनी प्र’हरी कार्यालय नआएर अर्की महिला लिएर उनी भारत गएका हुन् । तर प्रहरीले श्रीमान र ती महिलालाई झि’कायो ।
प्र’हरी कार्यालयमा आए पछि अर्की महिलाले मलाई यिनको वि’वाह भएको र छोरा समेत छ भन्ने थाहा थिएन म यि’नीसंग बस्दिन भनेर प्र’हरी कार्यालयवाट गएकी महिलासंग फेरी श्रीमान गएको उनको भनाई छ । श्रीमानले म अब तँसंग बस्दिन अब तँलाई र छोराको ज्या’न लि’न्छु भनेर ध’म्की दिएको बताएकी छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भर्खरै भारतमा भीषण बाढी आयो, ७६ को मृ*त्यु, ५४ लाख मानिस डुबानमा, अत्तालिए मोदी (हेर्नुहोस भिडियो)
भर्खरै सुस्माको प्रेमि नवराजको दो’षीलाई प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो ! को-को पर्यो स’जायमा